मैले १७ हजार मारेको सत्य होइन, पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु : प्रचण्ड -
अनुगमन तथा कार्बाही
January 15, 2020 upabhokta SarokarLeaveaComment on मैले १७ हजार मारेको सत्य होइन, पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले युद्धमा तत्कालीन माओवादीले १७ हजार मारेको कुरा सत्य नभएको बताएका छन्। बुधबार माघीको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।
‘मलाई ताकेर साथीहरुले धेरै कुरा राख्नु भएको छ। ति सबै कुराको जवाफ दिन सक्दिन। म तथ्यांक मात्र सच्याउन चाहन्छु। मैले १७ हजार मान्छे मारेर आएको तथ्यांक भन्ने गरिन्छ। साथीहरु यो सत्य होइन। यो सत्य होइन’, प्रचण्डले भने, ‘सत्य के हो भने हिजोको सामन्ती राजाहरुले १२ हजार मारेका हुन्। मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म जिम्मा लिन्छु। तर राजाले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने ? राज्यले मारेको पनि मेरै टाउँकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन।’
प्रचण्डले युद्धमा भएका राम्रा र नराम्रा कामको जिम्मेवारी लिने प्रष्ट पारे। ‘युद्धको म जिम्मा लिन्छु। त्यहाँ भएका राम्रा र नराम्रा कामको म जिम्मेवार छु। म त्यहाँ भएका कामबाट भाग्ने काम हुँदैन’, उनले भने ‘तर नगरेको काम पनि मलाई नै थुपार्ने काम नगर्नुहोस्।’
सँगै प्रचण्डले रेशम चौधरीलाई छिट्टै जेलबाट छुटाउने बताएका छन्। २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एक बालकसहित सातजनाको हत्या घटनामा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका थारु अगुवा चौधरीलाई छिट्टै छुटाउने आश्वासन उनले दिएका हुन्।
उनले रेशमलाई सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतको दिल्लीमा भेटेको सम्झना गरे। ‘रेशमसँग भेटेर खुलेआम कुरा राख्ने पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थियो भन्नेकुरा नबिर्सनु होला’, प्रचण्डले भने, ‘दोस्रो कुरा डिल्ली बजारको जेलमा गएर खोरमा गएर रेशमलाई भेट्ने पनि म नै हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोला।’
सँगै प्रचण्डले सभामुख र पार्टीलाई भेटेर कम्तिमा रेशमलाई माननीयको दर्ता दिनुपर्छ भन्ने मान्छे पनि आफैं भएको कुरा नबिर्सन आग्रह गरे। टीकापुर घटनाका झुटा मुद्दा खारेज गरेर रेशमलाई छुटाउने उनले प्रष्ट पारे। ‘टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा जेल परेका केही साथीहरु छुटेका छन्। रेशमलागायका साथीहरु छुट्न बाँकी छ’, उनले भने, ‘छुटाइन्छ, केही समय पर्खिनुहोला।’ अन्नपुर्णपाेष्टबाट
दोलखामा बनतरुल खन्ने क्रममा एक बृद्धको मृत्यु
दक्षिण कोरियामा ३ लाख रोजगारी सृजना
बिद्यार्थीलाइ पढाइसँगै दुना टपरी गाँस्न सिकाउदै केब्स स्कुल
September 6, 2019 September 6, 2019 upabhokta Sarokar
दसैंमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट सटही गर्ने तयारी
August 26, 2019 August 26, 2019 upabhokta Sarokar
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधारको क्रम जारी
December 3, 2019 upabhokta Sarokar
कक्षा ११ को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमै, शिक्षकले आफैंलाई नपत्याएको तर्क
September 16, 2019 upabhokta Sarokar
बाढी पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ४८ पुग्यो
July 14, 2019 upabhokta Sarokar
सामाजिक सञ्जालमा तपाईं कति घन्टा बिताउनु हुन्छ ? यस्तो छ विश्वको तथ्यांक
August 1, 2019 upabhokta Sarokar
मृत्यु सँग लडिरहेकी राधिका भन्छिन् ‘मलाई अझै बाँच्ने रहर छ”
July 19, 2019 upabhokta Sarokar
अर्को दशैँमा दीपक दीपाको ‘छक्का पन्जा ४’
December 27, 2019 upabhokta Sarokar
पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणः न्युज २४ को टेलिफोनबाट अस्मितालाई पटक–पटक सम्पर्क
August 23, 2019 upabhokta Sarokar
नेपालमा लाइसेन्स नपाएपछि चौधरी ग्रुपले युरोपमा किन्यो टेलिकम कम्पनी
२१ वर्षकी युवतीलाई डिएसपीले बलात्कार गरेपछि…
चीनबाट नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न सरकारलाई मानवअधिकार आयोगकाेनिर्देशन
धादिङमा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा ६ को मृत्यु, ५ जना गम्भीर घाइते
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका शोभाकान्त ढकालको घरमा विप्लव समूहद्वारा ब’म वि’स्फोट
२०७७ सालको दशैँ कात्तिकमा
देश जोगाउँदा महरा जेलमा ? हेर्नुहोस एमसीसीको पूर्ण पाठ !
‘मोवाईलको कारण २० वर्षपछि हरेक घरमा एउटा पागल हुन्छ’
मैले १७ हजार मारेको सत्य होइन, पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु : प्रचण्ड
Rastriya Upabhokta Sarokar Kendra
Phone : 015902009, 9818350926, 9841313288
Email : consumeraawaj@gmail.com
चार दिनपछि डडेल्धुरा अस्पतालको सेवा
दमकमा १९ जनामा डेंगुको संग्क्रमण देखिएको छ
प्रधानसेनापति असारको पहिलो साता चीन जानु हुँदै
युवा वैज्ञानिकको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल
समृद्ध राष्ट्र निर्माण महाअभियान अन्तर्गतको १०० औं शृङ्खला सम्पन्न